Fizahan-tany any Aostralia - Izay rehetra hitanao sy ataonao | Fitsangatsanganana tanteraka
I Aostralia dia firenena any Oseania izay mampifangaro ny majika amin'ny zorony amin'ny endrika tora-pasika, ary kolontsaina isan-karazany izay mendrika hotadiavina. Ka ny karazany isan-karazany ny mpizahatany. Raha vantany vao manitsaka ny diany isika dia tsy maintsy mankany amin'ny Sydney Opera House, asa kanto natao hampisehoana. Ao Sydney ihany koa no ahitantsika ny Bridge Bridge, ary koa ny seranan-tsambony, Katedraly St. Mary ary ny morontsiraka.
Raha mandeha any Melbourne isika dia tsy afaka manadino ny tranombokiny, ary koa ny Botanical Garden na ny tsenan'i Queen Victoria. Ho fanampin'ireo roa voalaza, dia misy tanàna maro izay tsy hadinontsika amin'ny diantsika, toa an'i Brisbane, Adelaide, Perth na ny Gold Coast, ankoatry ny hafa.
Mazava ho azy, ankoatry ny tanàn-dehibe sy ny hatsaram-panahiny rehetra, tsy azontsika atao ny manadino ny faritry ny valan-javaboary ary tsara fanompoana i Aostralia. Ny sasany amin'ireo malaza indrindra dia ny valan-javaboary Nambung na Purnululu ary Karijini. Fa angamba ny iray amin'ireo be mpiresaka indrindra dia ny valan-javon'ny Apôstôly 12. Ho fanampin'ny riandranon'i Wallaman na ny nosiny ary ny Haran-dranomasina. Aiza no tianao kokoa ny manomboka ny làlanao?
Planet Earth dia toerana mahavariana izay tsy mitsahatra ny manaitra antsika. Fantatrao ve fa any Aostralia dia misy farihy iray izay ...
ny maruuzen hace 11 volana .
Iray amin'ireo firenena manan-danja indrindra ao Oseania i Aostralia, tany lavitra izay toa toerana malalaka izao ...
ny Louis Martinez hace Taona 1 .
Tsy dia betsaka loatra ny famoronana siantifika sy teknolojia aostralianina toa izay hita any amin'ny firenen-kafa manerantany. Tsotra ny antony:…
Inona ireo orinasa aostraliana lehibe indrindra? Ity fanontaniana ity dia tsy fahita firy ivelan'ny faribolana ara-toekarena manokana. On…
ny Isabel hace Taona 1 .
Raha amin'ny fialan-tsasatrao manaraka dia te-hitsangatsangana any Aostralia ianao na te hianatra any amin'ity firenena ity, ...
Ny tontolo iainana any Aostralia dia tena samihafa sy manankarena tokoa. Tadidio fa firenena goavambe no resahina ...
ny Daniel hace Taona 1 .
Mpizahatany an'arivony maro isan-taona no mitsidika an'i Aostralia hahita ny kaontinanta nosy ary hankafy ny fomba fiainana aostralianina. Ary izay…
Alika Mena, alika angano an-tanàn-dehibe
ny Daniel hace 2 taona .
Red Dog dia lasa iray amin'ireo alika malaza indrindra eran-tany vokatry ny sarimihetsika «Red Dog, ...
Tsy manam-paharoa ny biby ao Aostralia
Iray amin'ireo antony maro mahatonga an'i Aostralia ho firenena mahavariana toy izany ny harena voajanahary manaitra azy. Ny biby ...
Mpilalao tenisy aostraliana malaza
ny Louis Martinez hace 2 taona .
Ireo mpilalao tenisy Australiana malaza indrindra dia nahatonga ny fireneny hanana hery lehibe amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny raketa. Tsy misy…
ny Alberto Legs hace 3 taona .
Voanio voanio, rano manga ary fasika volamena. Ny sary tonga lafatra izay soritsoritsika amin'ny nofinofintsika mandehandeha ary mety ho lasa ...
Fivavahana any Aostralia
Tarika Rock Australia tsara indrindra
Australia sy ny olan'ny akanjo nentim-paharazana